१२ बैशाख २०७८, आईतवार २३:३६
प्रेम वास्तवमा पारस्परिक खुसी र स्नेहको एक विस्तृत रुप हो । अन्यप्रति गरिने स्नेह नै प्रेम हो । प्रेम सागरजस्तो हुन्छ । अझ भनौँ, यसको गहिराइ नाप्न सकिन्न, अझ होइन प्रेम आकाशजस्तो हुन्छ, जसको विशाल फैलावट नाप्न सकिँदैन । प्रेम आत्माको स्वभाव हो । प्रेम हरकोहीको नैसर्गिक अधिकार हो र सबैले बुझ्नैपर्ने महत्वपूर्ण.....
११ बैशाख २०७८, शनिबार १४:३३
एजेन्सी । भियतनामका एक किसानले नेसनल पार्कमा भेटाएको एउटा गुफाले बैज्ञानिकलाई समेत अचम्मित तुल्याएको छ। उक्त गुफा उनले देख्नु भन्दा पहिला कसैले देखेका थिएनन्। सन् १९९१ मा उनले उक्त गुफा भेटाएका थिए। उक्त गुफालाई सबै भन्दा ठूलो गुफा पनि भनिदै आएको छ। गुफा भेटाएका किसानको नाम खान्ह थियो। उनी उक्त सार्कमा.....
२१ चैत्र २०७७, शनिबार १४:२९
यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ पत्याउने नसकिने घटना हुन्छन् । ब्राजिलमा त्यस्तै भएको छ । दुईजना ब्राजिलियन युवकहरुले एउटै युवतीलाई मन पराए र दुवैले प्रेम प्रस्ताव पनि राखे । अचम्म त के भने ती युवतीले दुवै युवकको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । त्यसपछि ती युवतीको प्रेम सम्बन्ध दुवै युवकसँग रह्यो । अर्थात् दुई.....
अचम्मको देश,जहाँ बिबाह पछि गरिन्छ कुमारित्व जाँच, फेल भय माइतै फिर्ता ।
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:५३
विवाहको गर्ने ठाउँ अनुसार फरक फरक परम्परा हुन्छ जसलाई पुरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तै एक परम्परा लोपोन्मुख समुदायमा पनि छ । जहाँ विवाहको पछि केटीेको कुमारित्व जाँच गराउनु पर्छ । त्यहाँ केटीले आफु विवाह अगाडी कुमारी हो भन्ने साबित गर्नुपर्छ । यदि कटी फेल जाँचमा फेल भएमा माइत फिर्ता पठाइदिनेछन् । महाराष्ट्रको.....
मानिसले पैसा कमाउन अनेकौ उपाय अपनाउने गरेका छन् । कसैका अनौठा शोख पनि हुन्छन् । जसले मानिसलाई अचम्म बनाउँछ । पैसा कमाउन एक जना महिलाले अपनाएको उपायले प्रहरीलाई पनि चकित् बनाएको छ । उनले केही ब्यक्तिको सहयोगमा प्रयोग भइसकेको क ण्ड म भेला पारेर पुन बेच्ने गरेकी थिइन् । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल.....
१३ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०२:४२
काठमाडौं । मानिसहरुलाई निन्द्रा लाग्नु र थकाइका कारण झुल्नु स्वभाविक कुरा हो । तर गाउँका सबैजना नै कुरा गर्दा गर्दै निदाउँछन् भन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्ला ? काजकिस्तानको एउटा गाउँमा मानिसहरु कुरा गर्दागर्दै निदाउँछन् । यस बारेमा वैज्ञानिकहरु नै अचम्ममा परेका छन् । काजकिस्तानको कलाची गाउँका मानिसहरु.....
१० चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:३२
पर्यटन प्रवर्द्धनका अनेक तरिका हुँदा रहेछन् । एउटा गाउँ गाउँले महिलाहरुको लामो कपालका कारण पर्यटनको केन्द्र बनेको छ र त्यहाँ हरेक वर्ष झण्डै ८० हजार पर्यटक महिलाको लामो कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् । खबर हो चीनको । गुआंग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाहरुको गाउँ हो । उक्त गाउँका ८० जना.....
२ चैत्र २०७७, सोमबार १२:१८
हुन त यौ’न स’म्बन्धको लागि प’रिपक्व उमेर र दुवै जनाको सहमति भए पुग्छ । तैपनि हाम्रो देशमा विवाहलाई यौ’न स’म्बन्धको अनौपचारिक स्वीकृति मानिन्छ । विवाहपूर्व यौ’न सम्बन्ध का’नुनी रुपमा प्र’तिबन्धित नभए पनि हामीकहाँ सामाजिक रुपमा भने यो कुरालाई असहज मानिन्छ । तर, जापान सरकारको अगाडि भने अर्को सं’कट आएको.....
OMG ? गोहीको पेट चिरेर निकालियो ८ वर्षका बालक
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:२३
एजेन्सी । सामान्य कुरामा सावधानी नअपनाउँदा ज्यानै जानेसम्मका घटना हुन्छन् । ८ वर्षका एक बालकलाई गोहीले निलेपछि उक्त गोहीको पेट चिरेर बालकको शरीर बाहिर निकालिएको छ । इण्डोनेसियामा भएको यो घटनामा बालकलाई निल्ने गोहीलाई समातेर उसको पेट चिरेर बालकको शवलाई बाहिर निकालिएको हो । द सनको रिपोर्टअनुसार मृत.....
२२ पुष २०७७, बुधबार ०६:२८
एजेन्सी – विवाह गर्दा मानिसहरुले आफ्नो रितीरिवाज अनुसार गर्ने गर्दछन् । धर्म अनुसार फरक फरक रितीरिवाज हुन्छन् । हाम्रो समाजमा फरक फरक धर्म मान्नेले आफ्नो रितीरिवाज अनुसार विवाह गरिरहेका हुन्छन् ।तर एउटा यस्तो स्थान छ जहाँ अनौठो परम्परा छ । जहाँ पुरुषको विवाह गर्न परेमा अर्काको श्रीमती चोर्नुपर्छ ।.....